ဘိုက်ရိုက်က ဂီတကို ဦးစားပေးပြီး ထုတ်ကုန်တွေကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ Soccer Chief Officer – Pandaily
ByteDance has recently raised the priority level for its music products to P1, on par with its games and education services. (Source: ByteDance)
Jul 02, 2021, 23:16ညနေ 2021/07/03 20:01:01 Pandaily
ပွညျတှငျးမီဒီယာမြား၏ ဖျောပွခကျြအရ36krဘိုက်တီးသည် မကြာသေးမီက ၎င်း၏ ဂီတထုတ်ကုန်များကို ဦးစားပေး၍ P1 သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဂိမ်းနှင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း ဘိုက်ရိုက်၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ လူကြိုက်များသည့် Soccer Platform မှ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ အဲလက်စ်ဇူ(Alex Zhu) က ယင်းစီမံကိန်းအား လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီး ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ပြည်ပတေးဂီတ Product Resso ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
သတင်းရင်းမြစ်များအရ ဇူကီသည် Resso ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် ၎င်း၏ ဂီတ၀န်ဆောင်မှုကို ဦးစားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သညျပလကျဖောငျးဟာ ဇူကီမှနျးရဲ့ထုတျကုနျကို ထငျဟပျစမေယျ့ TikTok နဲ့ ဆငျတူပါတယျ။
ဒီဆောင်းပါးရေးပြီးချိန်မှာ ဘိုက်က ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး။
Bytyte သည် ဂီတ၀န်ဆောင်မှုကို အစပျိုးရာတွင် မူပိုင်ခွင့်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ လက်တွေ့ကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း အလွန်အကျိူးပြုလျက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၏ Digital Traffic မှ အမြတ်အစွန်းများကို ကြော်ငြာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
Topics: မွငျကှငျးBytoming တည်ထောင်သူ Zhang Ming က မွေးရပ်မြေရှိ နဂါးကျောက်တောင်သို့ သိန်း ၅၀၀ လှူဒါန်း
ဘဂေငျြးအခွစေိုကျ နညျးပညာဘီလူးကွီးဖွဈတဲ့ ဘိုကျဘိုကျဈနဲ့ နီးစပျတဲ့ သတငျးရငျးမွဈတှကေ သညျရိုကျနှကျမှုဟာ မဟာဗြူဟာမွောကျတဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတဈခုဖွဈပွီး သူ့ရဲ့မဟာဗြူဟာ နရောခထြားမှုနဲ့ပတျသကျပွီး စဈမွပွေငျ ဆိုကျဘာလမျးကွောငျးတဈခုခုကို သိမျးပိုကျနိုငျဖှယျရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဂိမျးနဲ့ ဝတ်ထုတှကေနေ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ၊ ရိုကျနှကျတာတှကေို ဘိုကျက အှနျလိုငျးသုံးစှဲသူတှကေို အာရုံစူးစိုကျဖို့ စိတျအားထကျသနျနပေါတယျ။
အဓိကအာရီယာဘိုကျက သညျဂီတပစ်စညျးတှကေ ပွညျပဈေးကှကျမှာရောငျးခနြတောဖွဈပါတယျ။ Strategy က Reso ကို အစပြိုးခဲ့သလို TikTok နဲ့ တှဲခညျြပွီး အားမာနျအပွညျ့နဲ့ ဖနျတီးထားတဲ့ ဂီတအသိုငျးအဝိုငျး တခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဘိုက်သည် ဂီတလောကတွင် ကာလကြာရှည်စွာ ရှိနေခဲ့ပြီး ဂီတလောကတွင် ကဏ္ဍအသီးသီး၌ ပြန့်ကျဲနေခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး Universal Music, Warner Music နှင့် အခြားတေးသံသွင်းကုမ္ပဏီများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေမှာ Song Tone ရဲ့ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီးနောကျ Disney ရဲ့ အကွီးတနျး ဒုဥက်ကဋ်ဌ Kevin Meier (Kevin Mayer) ဟာ နိုငျငံရပျခွားမှာ ဂီတဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု မဟာဗြူ ဟာ အစီအစဉျတှေ အသေးစိတျလုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပေမယ့် Meiel ဟာ သြဂုတ်လမှာ အဆောတလျင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် ဒီထုတ်ကုန်တွေကို တီထွင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းမူပိုင်ခွင့်အ တွက် တုန်အသံနှင့် တုန်လှုပ် သော အသံ၊ အသံနှင့် အခြား ထုတ်ကုန်များကို ဘိုက်ရိုက်၊ ရိုက်ကူး သည့် Record ကုမ္ပဏီများကို နှစ်စဉ်ကြေး အမြောက်အမြား ပေးဆောင်ရန် လိုအပ် သည်။ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးနဲ့ ကိုယျပိုငျသံစဉျ ဂီတလုပျငနျးတှမှော အနညျးဆုံးတော့ ဒီအသုံးစရိတျတှကေို ပိုမိုထိုကျတနျအောငျ လုပျသှားမှာပါ။
Third party Research company Cunterpoint Research ၏ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် Spotify က ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ အွန်လိုင်းမှ ဂီတStreaming ဈေးကွက်ဝေစု ၃၁ရာခိုင်နှုန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ဝေစု၏ ၃၅ရာခိုင်နှုန်းကို အခပေးစာရင်းသွင်းခဲ့ကာ ဈေးကွက်ဝေစု ၃၅ရာခိုင်နှုန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ Apple တေးသီချင်းသည် နံပါတ်နှစ်နေရာတွင် ရပ်တည်နေပြီး စုစုပေါင်း ရှယ်ယာ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကို အပိုင် စာရင်းသွင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Alex Zhu က TikTok ၏ ဂီတထုတျကုနျမြားကို လှဲပွောငျးရယူပွီးနောကျ ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲ ဖွဈပျေါလာမညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို ဖနျတီးကာ အသိုငျးအဝနျးကို ဦးတညျသှားမညျဖွဈသညျ။ အခုအခါမှာတော့ ကမ်ဘာ့တေးဂီတ Streaming နဲ့ ပတျသကျပွီး ထုတျကုနျအမြိုးအစားတှေ ဈေးကှကျအတှငျး အမွငျ့မားဆုံး ပွညျ့နှကျနတေဲ့ TikTok နဲ့ Spotify တို့ ယှဉျပွိုငျနိုငျဖို့ စိနျချေါမှုတှေ ရှိလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ Resso ကို တီးခတျမှု မွငျ့မားစတောကွောငျ့ သုံးစှဲသူတှအေနနေဲ့ ဂီတအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ ထုတျကုနျတှကေို ကိုယျစားပွုဖို့ ပိုပွီး အလားအလာကောငျးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ထူးခွားတာကတော့ Resso က ဒုတိယမွောကျထုတျကုနျဖွဈတဲ့ TikTok ကို အပွငျမှာလှမျးမိုးထားခဲ့တာပါ။ ဇူကီဟာ လူသိအမြားဆုံး Musical ရဲ. တညျထောငျသူ ဖွဈပွီး Likly ရဲ့ လူကွိုကျမြားတဲ့ Inter-palace Platform ကို ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ရှနျဟိုငျးမှာ စတငျတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ တွင် ဘိုက်ရိုက်သည် Musical ကို ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး မာလိန်ကို ရှုံးကာ Face Book နှင့် Racer အပါအဝင် ပြိုင်ဘက်များကို ထိုးကြိတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ Musical ရဲ. တရားဝငျလှုပျနှိုးမှု တဈစိတျတဈပိုငျးဖွဈလာခဲ့ပွီး Alex Zhu (Alex Zhu) ဟာ သူ့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေမှာ Kevin Meier (Kevin Mayer) ဟာ တုနျတုနျ အသံထှကျ (TikTok) ကို ပွောငျးရှသှေ့ားပွီးနောကျ ဇူဘိုကျဈ (Bytedance) ရဲ့ ကုနျပစ်စညျး နဲ့ မဟာဗြူဟာ ဒု ဥက်ကဌ ရာထူးအတှကျ ပွောငျးရှခေံ့ရပါတယျ။ အဲဒီနောက် သူဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ Dutch Week ဒဏ်၊ Bytabytoon Head Chief Finance Chief Chief Chief နဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သတငျးရငျးမွဈမြားက ယခုနှဈ မတျလခနျ့မှ စတငျ၍ Alex Zhu သညျ Resso ၏ ထုတျကုနျမြားကို ထုတျလုပျသညျ့ အလုပျမြားကို မကွာခဏ စတငျလုပျဆောငျနကွေောငျး ဆိုသညျ။ “ Alex ဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး ထုတ်ကုန်တွေအပေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းတချို့နဲ့ Resso ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် အသံတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်” ဟု သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ပြောသည်။
Tags *ByteDance | Internet company | Music | music streaming app | social media | TikTok